फागुन १५ वुधवार
उदयपुर कटारी नगरपालिका ८ मा १० वर्षिया बालिकालाई यौन दुर्व्यवहार गरेको आरोपमा एक शिक्षकलाई प्रक्राउ गरिएको छ ।
कटारी नगरपालिका ८ नि.मा.वि कुरीङ्ग भञ्याङ्ग सिरिसेमा कार्यरत २८ वर्षिय शिक्षक (विनोद) भनिने जनादर्न लोहनिलाई वालिका बलत्कार गरेको आरोपमा मंगलवार बेलुका अस्थायी प्रहरी चेकप्वाईन्ट वेतेनीको टोलीले पक्राउ गरेको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी प्रमुख एसपी चन्द्रदेव राईले बताएका छन ।
लोहनिले आफु डेरागरि बस्दै आएको घरका आफ्नै विद्यालयमा अध्यनरत १० वषिया छात्रालाई अविभावक घरमा नभएको बेला मंगलवार वेलुका मुख थुनि वलत्कार गरेको पाइएको कटारी नगरपालिका वाड नं. ८ का वाडा अध्यक्ष कमल श्रेष्ठले वताएका हुन ।
लोहनि विरुद्द परिवारले बुधबार इलाका प्रहरी कार्यालय कटारीमा जाहेरी दिएका छन । वालिकालाई भने उपचारका लागि काठमान्डौ लगिएको वाडा अध्यक्ष श्रेष्ठको भनाइछ । पक्राउ परेका लोहनि लाई म्याद थपगरि थप अनुसन्धान भइ रहेको इलाका प्रहरिकार्यलय कटारीका डि.एस.पी. धुर्वकुमार श्रेष्ठले वताए ।
आरोपित व्यक्ति भुटानी शरणार्थी रहेको कमल वाडा अध्यक्ष श्रेष्ठले जानकारी दिए ।